Bogga ugu weyn Intee in le'eg ayaad tahay inaad kasbato si aad u xarayso cashuuraha 2022
Aad bay muhiim u tahay inaad u diyaargarowdo dhammaan macluumaadkaaga cashuurta sida ugu dhakhsaha badan (taasoo la macno ah inaad hadda bilawdo haddii aanad horeba u samayn).
Laakiin, waxay ku xiran tahay lacag intee le'eg ayaad samaysaa iyo sida aad u rabto inaad u xarayso cashuurahaaga, waxaa jira hal shay oo kale oo aad ka fiirsan karto: xitaa ma samaysaa lacag kugu filan oo lagaaga baahan yahay si aad cashuur u xarayso?
Haddii aanad lacag badan samaynayn, waa su'aal fiican in la waydiiyo. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad soo gudbiso haddii dakhligaaga sanadlaha ahi uu ka hooseeyo xadka la cayimay.
Xataa xaaladahan, arrimo kale sida caymiskaaga caafimaadka, haddii aad tahay qof iskii u shaqeysta, ama haddii aad u qalanto cashuurta dakhliga la kasbaday waxay dalban kartaa xaraynta canshuur celinta.
Maqaalkan, waxaanu si qoto dheer u eegi doonaa inta ay tahay in aad kasbato si aad u xarayso cashuuraha gudaha Maraykanka. Waxaan sidoo kale eegi doonaa xaaladaha kale ee saameeya xereynta canshuurta.
Hubi inaad akhrido maqaalkan ilaa dhamaadka, maadaama uu ballanqaadayo inuu noqon doono mid aad u xog-ogaal badan.
Qadarka ay tahay inaad kasbato si aad uga fogaato bixinta canshuurta dakhliga federaalka waxaa lagu go'aamiyaa da'daada, heerka xereynta, ku tiirsanaanta canshuur bixiyayaasha kale, iyo dakhliga guud.
Tusaale ahaan, qof keli ah oo da'diisu ka yar tahay 65 jir helaya lacagta ugu badan ee cashuurta ka hor 2018 waxay ahayd $12,000.
Haddii dakhligaagu uu ka hoos baxo heerka IRS, waxaa laga yaabaa inaan lagaaga baahnayn inaad xerayso cashuur, si kastaba ha ahaatee, weli waa fikrad fiican inaad sidaas samayso.
Waa maxay waxa ugu yar ee buuxinta cashuuraha?
Uma baahnid inaad xarayso canshuur celinta dakhliga federaalka haddii dakhligaaga guud ee sanadka uu ka hooseeyo xad go'an.
Si kastaba ha ahaatee, xadka saxda ah waxaa go'aamiya xaalado dhowr ah.
Heerka xereyntaada - Tusaale ahaan, fayl-bixiyayaasha keligood ah waxay leeyihiin xad ka hooseeya marka lamaanayaasha is qaba ay si wadajir ah u xareeyaan.
Age - Heerarka xaraynta ee kuwa 65 iyo ka weyn ayaa guud ahaan ka sarreeya dhammaan xaaladaha xaraynta.
Heerka ku tiirsanaanta – Heerarka la xareeyo carruurta iyo kuwa kale ee ku tiirsan waxay ku kala duwan yihiin nooca dakhliga ay sameeyaan (la kasbaday ama aan la kasban).
Haddii aad iskaa u shaqeysid, waxaa laga yaabaa in lagu soo rogo sharciyo dheeraad ah.
Intee lacag ayaad u baahan tahay inaad sameyso?
Tani adiga ayay kugu xiran tahayheerka xaraynta. Haddii aad qorshaynayso in aad fayl garaysato sidii qof keli ah, lamaane is qaba oo si wada jir ah u fayl garaynaya, lamaane is qaba oo gooni gooni u fayl garaynaya, ama madaxa qoyska?
Aan mid walba si gaar ah u eegno.
Haddii aad keligaa tahay oo aad ka yar tahay da'da 65, waxaad heli kartaa ilaa $12,200 dakhliga guud ee sanadlaha adiga oo aan soo gudbin canshuur celin.
Haddii aad tahay 65 ama ka weyn oo aad doonayso inaad xarayso hal cashuur celin, qaddarka ugu yar wuxuu noqonayaa $13,850.
Haddii aad sameyso $18,350 ama ka badan oo aad ka yar tahay da'da 65, waa inaad soo gudbisaa canshuur celinta haddii aad u qalanto madaxa xaaladda qoyska oo aad rabto inaad sidaas u fayl-gareeyso. Haddii aad tahay 65 ama ka weyn, dakhligaaga guud waa $20,000 sanadkii.
XIDHIIDHKA: Sideen uga Iibsan karaa Bitcoin gudaha Nigeria 2022? Hagaha Bilowga Hantida
Haddii aad tahay qof dumar ah oo laga dhintay ilmo aad ku tiirsan tahay, waxaad buuxin kartaa si wadajir ah adigoo xaasle ah, iyadoo farqiga da'da uu weli soconayo: ugu yaraan $24,400 haddii aad ka yar tahay 65, ugu yaraan $25,700 haddii aad tahay 65 ama ka weyn.
Guursaday oo gooni u xareeyay:
Kuwa is qaba oo si gaar ah u fayl gareynaya waa inay xareeyaan canshuur celin xitaa haddii dakhligooda guud uu yahay $5 oo keliya.
Guursaday oo wada xareeyay:
Inta ay tahay in aad kasbato haddii aad isqabtaan oo aad si wadajir ah u xeraysan tihiin waxaa go'aaminaya da'da adiga iyo saygaaga/xaaskaaga, laakiin inta badan waa labanlaab waxa uu u baahan yahay qofka keligiis ah.
Waa inaad kasbato ugu yaraan $24,400 haddii labada qof ee is qabta ay ka yar yihiin da'da 65. Waa inaad kasbato ugu yaraan $27,000 haddii labada lammaane ay jiraan 65 ama ka weyn. Kala qaybso haddii midkiin uu jiro 65 ama ka weyn; waxaad u baahan doontaa inaad kasbato $25,700.
Akhri Sidoo kale: 50ka Apps ee Lacag-bixinta ugu Fiican Si aad Lacag Dheeraad ah u Hesho
Xeerarka loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta ku tiirsan
Marka qof uu ku sheegan karo canshuur celintooda, xeerarku way isbedelaan. Xitaa haddii dakhligaagu uu ka hooseeyo kan lagu sawiray shaxda sare, waxaa laga yaabaa in lagaa baahdo inaad soo gudbiso canshuur celinta federaalka xaaladan.
Sababtoo ah IRS waxay dakhligaaga guud u qaybisaa laba qaybood - dakhliga la kasbaday iyo dakhliga aan la kasban - xadka ayaa u muuqda inuu ka duwan yahay.
Dakhliga la kasbaday waa lacagta lagu kasbado u shaqaynta qof kale ama lahaanshaha ganacsi.
Dakhliga maalgashiga, sida dulsaarka, saami qaybsiga, ama faa'iidada raasumaalka, ayaa loo arkaa dakhli aan la kasban. Waxa kale oo ku jiri kara cafiska deynta, dakhliga Lambarka Bulshada, hawlgabka, iyo hantida kale ee la canshuuri karo.
Shuruudaha bilowga ah ee marka ku-tiirsane ay tahay inuu xereeyo waxay noqon kartaa mid adag, markaa si taxadar leh u baro.
Waxay badanaa ku jiraan tilmaamaha foomka 1040 sannad kasta. Macluumaad dheeraad ah ayaa sidoo kale laga heli karaa daabacaadda IRS 501.
Goorma ayaa la canshuuraa Lacag-bixinta Lambarka Bulshada?
Haddii aad qaadato macaashka Lambarka Bulshada oo aadan haysan dakhli kale oo la canshuuri karo, waa inaad baartaa inaad u baahan tahay inaad soo celiso maadaama dakhliga canshuur dhaafku uu ka dhigi karo dheefahaaga mid la canshuuri karo xitaa haddii aadan haysan dakhli kale oo la canshuuri karo.
Waa kuwan tusaale meelaha laga yaabo inaad u baahato inaad xarayso, inkasta oo dakhligaagu uu cashuur dhaaf yahay:
Waxaad ka yar tahay 65 jir waxaadna helaysaa $30,000 dakhliga Lambarka Bulshada, oo lagu daray $31,000 oo dulsaar cashuur la'aan ah. Macaashka Lambarka Bulshada waxaa lagu canshuuri doonaa qiime dhan $14,700.
Waa inaad soo gudbisaa cashuur celinta sababtoo ah tani way ka badan tahay dhimistaada caadiga ah ($12,550 cashuur bixiye keliya sanadka 2021).
XIDHIIDHKA: Sida Lacag Looga Sameeyo Ikhtiyaarka Ganacsiga 2022
Si aad u aragto haddii macaashka Lambarka Bulshada ay tahay mid la canshuuri karo, samee waxyaabaha soo socda:
Dakhli kasta oo kale, oo ay ku jiraan dulsaarka cashuur-dhaafka ah, ku dar kala badh dakhliga Lambarka Bulshada.
Kadibna barbar dhig lacagtaas heerka xaraynta cadadka saldhiga. Qaar ka mid ah faa'iidooyinkaaga ayaa laga yaabaa in la canshuuro haddii wadarta guud ay dhaafto qaddarka aasaasiga ah.
Waa maxay xadiga ugu badan ee ganacsiga yar yar uu kasban karo ka hor intaysan bixin cashuuraha?
Waa inaad bixisaa cashuur dhammaan dakhliga soo gala, iyadoon loo eegayn faa'iidada ama khasaaraha, haddii aad leedahay ganacsi yar.
Canshuur celinta ay tahay inaad xareyso waxaa lagu go'aamiyaa qaabka shirkaddaada. Haddii aad leedahay shirkad gaar ah, tusaale ahaan, waxaad ku dari doontaa jadwalka C canshuur celintaada shakhsi ahaaneed.
Haddii aad hesho wax ka badan $400 oo ah madax-bannaani ahaan, waa inaad sidoo kale bixisaa cashuuraha iskaa u shaqeysiga. Canshuurahani waxay daboolayaan Medicare iyo canshuurta badbaadada bulshada.
Haddii dakhligaaga saafiga ah uu ka badan yahay $400, waa inaad buuxisaa IRS Form 1040, Jadwalka C, iyo Jadwalka SE. Waa inaad ka celisaa cashuurta dakhliga federaalka iyo gobolka, iyo sidoo kale cashuuraha Lambarka Bulshada iyo Medicare, shaqaale kasta haddii aad mid leedahay.
Duruufaha kale ee u baahan xereynta canshuur celinta
Waa inaad xaraysataa canshuur celinta iyadoon loo eegin dakhligaaga haddii:
Waxaad ku kasbatay ugu yaraan $400 adoo iskaa u shaqeysta.
Koontada kaydka caafimaadka, Koontada Keydka Caafimaadka ee Archer, ama Medicare Advantage MSA ayaa kuu qaybisay.
IRA, koontada kaydka caafimaadka, ama akoon kasta oo cashuurta loo xagliyo, waxa lagugu leeyahay cashuur.
Shaqaalaha gurigu waxay kugu leeyihiin canshuur.
Canshuurta ugu yar ee beddelka ah ayaa la leeyahay.
Kaniisad ama urur kaniisad ayaa ku siisay in ka badan $108.28.
Adiga ayaa mas'uul ka ah canshuur celinta.
Talooyinka aadan u gudbin loo-shaqeeyahaaga ama in loo-shaqeeyahaagu aanu ka jarin mushaharkaaga, waxaa lagugu leeyahay cashuurta Lambarka Bulshada ama Medicare.
Caymiska canshuurta caymiska waxaa horay loo siiyay adiga, xaaskaaga ama xaaskaaga, ama qof ku tiirsan oo ka iibsaday caymiska caafimaadka suuqa caymiska.
Dhibcaha canshuurta caymiska caafimaadka waxaa horay loo sii siiyay adiga, xaaskaaga/saygaaga, ama qof ku tiirsan oo caymis caafimaad ka iibsaday suuqa caymiska.
Talooyinka aad uga warbixisay shirkaddaada, caymiska nolosha-kooxda, iyo cashuuraha dheeraadka ah ee xisaabaadka kaydka caafimaadka, waxa lagugu leeyahay cashuuraha hawlgabka Bulshada, Medicare, ama tareenada aan la ururin.
Ma doonaysaa in lagaa dhaafo xeraynta cashuur celinta? Waxaa jirta sabab adag oo ay tahay inaad marka hore sameyso.
Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto dhimista cashuurta taasoo keeni doonta lacag soo celin. Markaa, haddii aad ka fekereyso inaad xareyso, tixgeli kuwan soo socda:
Mushaharkaaga waxa laga jaray cashuurta dakhliga.
Waxaad bixisay canshuur qiyaas ah ama waxaad ka heshay lacag dhimis sanadkii hore oo aad codsatay canshuurta la saadaaliyay ee sanadkan.
Dhibcaha cashuurta dakhliga la kasbaday adigaa diyaar kuu ah.
Dhibcaha cashuurta ilmaha ee dheeraadka ah waa kuu diyaar.
Dhibcaha waxbarashada Fursada Ameerika waa kuu diyaar.
Waxaad xaq u leedahay cashuurta daryeelka caafimaadka.
Waxaad xaq u leedahay canshuur celinta shidaalka federaalka.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsasho Iyo Iibinta Cryptocurrency Sanadka 2022 | Tilmaan Buuxo
Sideen hoos ugu dhigi karaa dakhligayga la cashuuri karo?
Ku darida kaydka hawlgabkaaga oo leh heerka (ma aha Roth) IRAs iyo 401 (k) s, ilaa ugu badnaan wax ku biirinta la ogolyahay, waa hal xeelad oo lagu dhimo dakhliga la cashuuri karo.
Istaraatiijiyad kale oo lagu dhimayo dakhligaaga la canshuuri karo waa inaad ku biirto Koontada Keydka Caafimaadka (HSA) ama Koontada Kharashka Dabacsan (FSA).
Kahor intaadan bixin cashuurta, waxaa suurtogal ah inaad hesho kumanaan doolar. Xitaa haddii dakhligaagu ka hooseeyo heerka goynta oo aan lagaa rabin inaad bixiso cashuur, waa inaad xeraysataa cashuur si aad u hesho jeeg lacag celin ah.
Waxaad ka faa'iidaysan kartaa macluumaadka aad diiwaan geliso si aad u raadsato canshuur celinta, oo ay ku jiraan dakhliga aan la kasban, ee sanadka soo socda. Waxaad bixin kartaa oo aad xereyn kartaa canshuur celinta sanad walba, sidoo kale waxaad raadsan kartaa credit credits haddii ay khuseyso, adiga oo qiyaasaya dakhligaaga la canshuuri karo.
Kala hadal khabiirka cashuuraha ku saabsan xeraynta cashuurahaaga gaarka ah, xisaabinta xisaabaadka, mushaharka, cashuuraha shirkadda, iyo ku darista gudaha Maraykanka haddii aad wax su'aalo ah qabto ama aad u baahan tahay caawimo cashuureed.
Waxaan rajeyneynaa inaad maqaalkan ka heshay mid aad waxtar u leh. Si fiican u raac inaad raacdo tilmaamaha halkan lagu qeexay.
Haddii aad kasbatay wax ka yar $5,000, ma inaad canshuur xeraysato?
Haddii fayl-gareeyaha uu fayl-gareeyo wax ka yar $5,000 sannadkii, badanaa maaha inay wax ka xareeyaan IRS. Waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa heerkaaga shaqo si aad u aragto haddii aad samaysay wax ka yar $5,000.
Haddii aanad lacag badan samayn, ma tahay in aad canshuur xerayso?
Haddii aadan lacag badan sameynin sanadka oo dhan, waa la ogol yahay inaad iska dhaafto xereynta soo celinta. Sidoo kale waa la aqbali karaa in la soo diro soo-celinta sheegaysa in aad qaadato wax ka yar mushaharka ugu yar.
Si aad u xarayso canshuur celinta, waa inaad heshaa xaddi lacag ah.
Si aad u dhamaystirto canshuur celintaada, waa inaad kasbataa ugu yaraan $12,400, in kastoo tiradani ay kala duwanaan karto iyadoo ku xiran da'daada iyo heerka aad xareyneyso.
Intee in le'eg ayay tahay inaan sugo lacag celinta?
Haddii aad u baahan tahay inaad xarayso soo celinta waraaqaha, waa inaad sugtaa lix ilaa siddeed toddobaad ka dib marka ay IRS hesho. Shakhsiyaadka si elektaroonig ah u xareeya cashuurtooda waxay heli doonaan soo celintooda qiyaastii saddex toddobaad gudahood.
5. Goorma ayaan xereynayaa cashuurteyda?
Sannad kasta, waa inaad xeraysataa macluumaadkaaga cashuurta. Waa inaad soo ururisaa dhammaan hawlaha la cashuurayo taariikhda kama-dambaysta ah ee sannadlaha ah inta lagu jiro sannadka. Waxaad xereyn kartaa jadwal ama sanad maaliyadeed, iyadoo ku xiran sidaad u maareyso dhaqaalahaaga.
Ma ogtahay inay jiraan siyaabo lacag looga sameeyo internetka adoon bixin waxba? Ka fakar taas! Adiga…
Intee lacag ayaad ka samayn kartaa TikTok
TikTok waa xoog muhiim u ah warshadaha warbaahinta bulshada, laakiin sidoo kale aad ayey ugu cusub tahay. Haddii aad eegayso…